Tag: mailaka mamaly finday » Martech Zone
Tag: mailaka mamaly amin'ny finday
Zoma, Aogositra 7, 2015 Zoma, Aogositra 7, 2015 Douglas Karr
Fotoana famakiana: 2 minitra Amin'ny faran'ity taona ity, mihoatra ny 80% ny olon-dehibe amerikana no hanana smartphone. Ny fitaovana finday dia manjaka amin'ny tontolon'ny B2B sy B2C ary manjaka eo amin'ny marketing ny fampiasana azy ireo. Ny zavatra rehetra ataontsika ankehitriny dia manana singa finday amin'izany izay tsy maintsy ampidirintsika amin'ny paikadim-barotra. Inona no atao hoe Marketing amin'ny finday: marketing amin'ny finday na miaraka amin'ny fitaovana finday, toy ny finday marani-tsaina. Ny marketing amin'ny finday dia afaka manome fotoana sy toerana ho an'ny mpanjifa
Fotoana famakiana: 2 minitra Tsy misy zavatra tena mahadiso fanantenana ahy toy ny rehefa manokatra mailaka tadiaviko amin'ny findaiko aho ary tsy afaka mamaky azy. Na ny sary dia sakan'ny fehezan-dalàna fa tsy hamaly ny fampisehoana, na malalaka be ilay lahatsoratra ka mila miverina mandroso aho mamaky azy. Raha tsy manakiana izany dia tsy miandry ny hiverina any amin'ny biraoko intsony aho hamaky azy. Hofafako izany.
Fotoana famakiana: 2 minitra Raha nikasa ny hanatsara ny fifandraisanay izahay, ny zavatra voalohany nataonay dia ny fampiharana ny maodelin'ny mailaka mamaly amin'ny alàlan'ny sehatray, CircuPress, hizarana ny atiny (Hisoratra anarana isan'andro na isan-kerinandro). Tsy nahagaga ny fanovana ny antontan'isa. Mandefa mailaka isan-kerinandro amin'ireo mailaka maherin'ny 70,000 izahay amin'ny alatsinainy ary asehonay ny fanadihadianay fa izany no fiakaran'ny fifamoivoizana mihoatra ny medium na fampiroboroboana rehetra. Tsy nitranga izany raha tsy
Fotoana famakiana: <1 minitra Tsy azoko antoka loatra fa ny statistikan'ny marketing mailaka tokana eto dia tena ilaina amin'ny marketing amin'ny mailakao, fa ny sasany amin'izy ireo dia tena misongadina amiko: Ny fidiram-bolan'ny mailaka mailaka dia ambany ary tsy dia ampiasaina firy. Gaga foana aho ao amin'ny bilaoginay manokana fa mivarotra tsy tapaka ny doka lohateny… fa tsy nisy nividy dokam-barotra tamin'ny alim-bolantsika isan'andro sy isan-kerinandro izay mahatratra 75,000 ny isan'ny mpanjifa isan-kerinandro. Ao amin'ny tampon'isa ny Adoption mailaka, miaraka amin'ny